Vavaka mba ho vita soa aman-tsara. ? Mirary fandefasana tsara
Ny vavaka amin'ny fandefasana tsy misy olana Izy ireo dia afaka manampy antsika amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fandefasana tsara. Afaka manampy antsika handia izao fiainana sarotra izao toy ny mitondra fiainana ho an'izao tontolo izao.
Na dia toa tsy dia toa izany aza ary misy olona mahita an'io tranga io voajanahary, ny tena izy dia toe-javatra marefo izay ahitan-doza hatrany ny reny sy ny zaza ao am-bohoka. Ny fahaizana mangataka fanaterana milamina dia mety hitondra fahatokisan-tena sy fandriampahalemana ho an'ny reny.
Ho fanampin'izany, ity vavaka ity dia fampiononana ny fitoniana ho an'ny mpianakavy satria fantatrao izany mahery ny vavaka ary ny fahaterahana dia tsy zavatra mora, noho izany ny mpianakavy mialokaloka amin'ny vavaka dia afaka mahita fiadanana sy fiadanam-po izay manome fahatokisana amin'ny fahafantarana fa Andriamanitra mihitsy no mikarakara ny fiainany roa tonta.
1 Ny vavaka ho an'ny fanaterana tsy misy arakaraka ny tanjon'ireo vavaka ireo?
2 1) Fivavahana ho an'ny fanomezana nefa tsy misy olana
3 2) Vavaka ho an'i Saint Ramon Nonato momba ny fiterahana (fiterahana tsara)
4 3) Vavaka ho an'ny vehivavy bevohoka hiteraka
5 4) Vavaka alohan'ny fanaterana (mandeha tsara)
Ny vavaka ho an'ny fanaterana tsy misy arakaraka ny tanjon'ireo vavaka ireo?
Ny tanjon'ny fanatanterahana izao vavaka izao mba hananan'ny fahaterahana tsara indrindra fa ny reny sy ny zaza izay eny an-dalana dia mety ho sitrana, miteraka tsy fitarainana ary mandeha haingana ny zava-drehetra.
Ity vavaka ity dia azo atomboka amin'ny voalohan'ny vohoka satria izy io koa dia mitaky fandriam-pahalemana sy filaminana ho an'ny ankohonana iray manontolo. Ny fandehanana miasa amin'ny sainao na fonao feno alahelo dia mampidi-doza tokoa ary izany no antony maha-zava-dehibe an'io vavaka io.
1) Fivavahana ho an'ny fanomezana nefa tsy misy olana
«Maria, renin'ny fitiavana tsara tarehy, zazavavy mamy avy any Nazareta, Ianao izay nanambara ny fahalehibiazan'ny Tompo ka nanao hoe" eny ", nanao ny tenanao ho renin'ny Mpamonjy sy reninay: Henoy anio ny vavaka ataoko aminao:
(Ataovy ny fangatahanao)
Tao anatiko dia mitombo ny fiainana vaovao: kely iray izay hitondra fifaliana sy fifaliana, ahiahy sy tahotra, fanantenana, fahasambarana any an-tranoko. Tandremo io ary arovy, raha arovako ao an-tratrako io.
Ry Ramatoa Miandry Mamy, omeo azy ireo ny fitiavanao sy ny herimponao. Amena. "
Tsy maintsy ny vavaka fitokisana ho an'ny fandefasana tsy misy olana.
Ny fahasarotana amin'ny asa manontolo dia ny fahafantarana ny reny rehetra.
Ampidiro ity dingana ity avy amin'ny tanan'ny Tompo Andriamanitra mahery, matoky fa mahery ny vavaka ary Andriamanitra sy ny Virjiny Virjiny dia hikarakara ny fiainana ao anatin'ity dingana ity.
Ilaina ny ho tony ary hanana faharetana hiandry ny ho tonga rehetra. Mahery Andriamanitra ary ho azy tsy misy azo atao, vonona hatrany izy hihaino antsika sy hanampy antsika amin'ny fotoana rehetra.
2) Vavaka ho an'i Saint Ramon Nonato momba ny fiterahana (fiterahana tsara)
«Ry mpiaro misandratra, Saint Ramón, maodely fiantrana ho an'ny mahantra sy sahirana, eto no ihazahanao miankohoka am-panetren-tena eo alohan'ny tongotrao hitalaho ny fanampianao amin'ny filako.
Tahaka ny fifalianao lehibe indrindra amin'ny fanampiana ny mahantra sy ny mila eto an-tany, ampio aho, miangavy anao aho, ry Saint Ramon, amin'ity fahoriako ity.
Ho anao, mpiaro be voninahitra tonga amin'ny fitahiako ilay zanaka entiko ao an-tratrako.
Arovy aho sy ilay zaza amin'ny gombako izao ary mandritra ny fandefasana ho avy.
Mampanantena anao aho fa hampianatra azy araka ny lalàna sy didin 'Andriamanitra.
Henoy ny vavaka ataoko, ry malalako, San Ramón, ary ampahafantaro ahy ho renin'ity zazalahy ity izay antenaiko fa hateraka amin'ny alàlan'ny fanelanelanana mahery vaika ataonao.
San Ramón Nonato dia fantatra amin'ny olo-masin'ny vehivavy bevohoka. Lasa mpanelanelana amin'ireo antony sarotra izy tamin'ny fiainany dia tsy maintsy nandia toe-javatra sarotra maro nandresana azy rehetra sy nanompo ny Tompo hatrany. Ny fitoriana ny filazantsara sy ny fanampiana ny sahirana dia zavatra iray mampiavaka azy hatrany. Mandraka ankehitriny dia manana mpanampy mahatoky foana izy amin'izao fotoana izao izay be dia be ny fanahiana sy tahotra.
3) Vavaka ho an'ny vehivavy bevohoka hiteraka
«Ry Maria Virjiny, rehefa lasa Reny sahala aminao aho, omeo fo mitovy amin'ny anao aho, miorim-paka amin'ny fitiavany ary tsy miovaova amin'ny fahatokiany. Ny fo feno fitiavana mamirapiratra amin'ny fahalemem-panahy ary tsy mandà hanome ny tenany ho an'ny hafa.
Ny fo ... maloto mametraka fitiavana ao anaty antsipirihany kely sy ny serivisy fanetren-tena. Feno fahadiovam-po tsy misy pentimpentina amin'ny sakoroka, malalaka, malalaka ny mankafy ny hafalian'ny hafa. Ny fo mamy sy tsara izay tsy manameloka na iza na iza ary tsy reraka mamela heloka sy be fitiavana fotsiny.
Andriamanitra ô, tena naneho ny fitiavanao an'i Saint Ramon Nonato mpanomponao, namelona azy tamin'ny fomba mahafinaritra sy nahatongavanao ho mpiaro an'ireo ho lasa reny; amin'ny alàlan'ny fahamendrehanao sy ny fanelanelanana dia mangataka aminao aho fa ny fiainana vaovao izay nambolenao tamiko dia tonga amim-pifaliana hampitomboana ny isan'ny zanakao.
Ho an'i Kristy Tompontsika.
Ny vavaka ho an'ny vehivavy bevohoka izay efa hiteraka dia mahery tokoa.
Rehefa bevohoka ny vehivavy iray, ny fotoana fahaterahana, na dia efa nomanina aza dia mety hanaitra ny ankohonana manontolo ary izany no antony tsy maintsy anadinoantsika hatrany ity vavaka manokana ity mandritra ny fotoana hitaterana.
Ho an'ny reny dia ny antony ny fahatokisan-tena sy ny fahatoniana dia manana fehezana azo averina Mandritra ny fizotry ny fiterahana na ny fianakaviana dia mety hanao io vavaka io nefa tsy maintsy miandry izy ireo.
Afaka mangataka ny ho haingana isika, fa tsy mampijaly ny zava-drehetra ary mandeha ny fangatahana tsy misy farany izay araky ny filàn'ny olona tsirairay fa miaraka am-pinoana lehibe fa ho avy ny valiny.
4) Vavaka alohan'ny fanaterana (mandeha tsara)
«Tompoko, Ray Tsitoha! Ny fianakaviana no andrim-pianakaviana tranainy indrindra, antitra toy ny olombelona ihany izy io.
Saingy, satria andrim-panjakana anao manokana ity ary fomba tokana ahafahan'ny olona manatona an'izao tontolo izao ary mivoatra mankany amin'ny fahatanterahana tanteraka, ny herin'ny ratsy no manafika azy, ka mahatonga ny olona hanamavo ny votoatin'ny sivilizasiona. Christian.
Tao anatin'ny hatezerany namono tena izy ireo dia manandrana hamely mafy ireo fianakaviana. Avelao izahay hahomby amin'io asa maizina io, Tompo, amin'ireo teti-dratsy manimba ny fianakaviana kristianina.
Amin'ny alàlan'ny fanelanelanana be voninahitra an'ny mpanomponao Saint Ramon Nonato, mpisolovava mpiaro any an-danitra ho an'ny fahasambarana, fiadanan-tsaina sy fiadanan'ireo fianakaviana kristiana, mangataka aminao izahay mba hihaino ny vavakay.
Amin'ny alàlan'ny fahamendrehan'ity olo-masina lehibe ity dia manome toky anay izahay fa ny trano dia azo atao modely alohan'ny fianakavian'i Holy avy any Nazareta.
Aza avela hifandresy amin'ny fahavalon'ny fianakaviana kristianina ny fahavalon'ny fianakavian'ny kristiana, fa hamadika azy ireo ho amin'ny fahamarinana ho voninahitry ny anaranao masina.
Ny tontolo Ny ara-panahy dia zava-misy tokony ho fantatsika amin'ny fotoana rehetra. Ny fanomanana ny zava-drehetra mandritra ny fotoana fitaterana dia misy koa ny fiainantsika ara-panahy satria any no misy ny fihetsem-po na fahatsapana izay mety hahatonga antsika hahatsapa ho ratsy na mangetaheta ao anatin'ny fotoana fohy ho marefo, mampidi-doza ary mahagaga toy ny fahaterahan'ny fiainana vaovao.
Alohan'ny fanaterana dia afaka manao vavaka miaraka amin'ny ankohonana isika, miaraka amin'ny ray aman-drenin'ilay zaza sy ireo namana izay toa te-hiditra amin'ny vavaka izay afaka mitondra fiovana tsara eo afovoan'ny fiterahana. Mahery ny vavaka raha atao amin'ny finoana sy avy amin'ny fo ary tsy misy vavaka vavaka amin-kitsimpo fa tsy ray sy reny ho an'ny zanany.
Mino mandrakariva ao amin'ny vavaka hangatahana ary ny fanomezana tsara raha tsy misy olana.